Cirfo “Mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii bulshada ayaa gobolka ka socda” – Radio Muqdisho
Cirfo “Mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii bulshada ayaa gobolka ka socda”
Maamulka gobolka Galgaduud ayaa wada mashaariic dib loogu dhisayo adeegyadii danta guud ee ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay.
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye “Cirfo” ayaa Radio Muqdisho u sheegay in sanadkii tegay mashaariic kala duwan laga fuliyay degmooyin ka tirsan gobolka, isagoo xusay in sanadkan uu qorsheynayo mashaariic xoog leh oo dib loogu dhisayo xarumaha dowladda.
“Cirfo” ayaa xusay in maalmo ka hor uu dhagax dhigay dhismaha xarunta maamulka gobolka Galgaduud oo laga hirgelinayo degmada Dhuusamareeb oo ah xarunta gobolka.
Wuxuu tilmaamay gudoomiye “Cirfo” in mashaariicdaasi ay shaqooyin kala duwan ka helayaan dhalinyaro badan oo shaqo la’aan ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay in maamulkiisu uu qorsheynayo mashaariic horumarineed oo gobolka laga hirgeliyo sanadkan.
“Cirfo” ayaa sheegay in sanadkan maleeshiyaadka Shabaab laga xoreyndoono gobolka, isagoo ka dalbaday bulshada gobolka iney ka qeyb qaataan nabadgelyada iyo horumarka gobolka.
Ciidanka XDS oo raashin gar gaar ah gaarsiiyay magaalada Buurweyn ee G/Hiiraan
Xeer ilaaliya guud ee Qaranka oo dalka dib ugu soo laabtay (Sawirro)